I-Plezi One: Ithuluzi Lamahhala Lokukhiqiza Ukuhola Ngewebhusayithi Yakho ye-B2B | Martech Zone
Ngemva kwezinyanga ezimbalwa kwenziwa, Plezi, umhlinzeki wesofthiwe ye-SaaS marketing automation, yethula umkhiqizo wayo omusha ku-beta yomphakathi, i-Plezi One. Leli thuluzi lamahhala nelinembile lisiza izinkampani ze-B2B ezincane nezimaphakathi ziguqule iwebhusayithi yazo yebhizinisi ibe isiza sokukhiqiza okuholayo. Thola ukuthi kusebenza kanjani ngezansi.
Namuhla, izinkampani ezingu-69% ezinewebhusayithi zizama ukuthuthukisa ukubonakala kwazo ngokusebenzisa iziteshi ezihlukahlukene ezifana nokukhangisa noma izinkundla zokuxhumana. Nokho, u-60% wabo awunawo umbono wokuthi ingakanani inzuzo yabo efinyelelwa ngewebhu.
Bebhekene nenkimbinkimbi yawo wonke amasu ahlukene okumaketha okudijithali, abaphathi badinga izinto ezimbili ezilula: ukuqonda okwenzekayo kuwebhusayithi yabo nokwenza umkhondo kuwebhu.
Ngemva kweminyaka engu-5 yokweseka izinkampani ezingaphezu kuka-400 nge-software yayo yokumaketha yonke into, i-Plezi ifuna ukuqhubekela phambili ngokwethula i-Plezi One. Inhloso enkulu yale software yamahhala ukuguqula noma iyiphi iwebhusayithi ibe ijeneretha eholayo, ukuze kusekelwe inani elikhulu lamabhizinisi kusukela ngesikhathi yethulwa.
Ithuluzi Elilula Lokuguqula Iwebhusayithi Yakho Iyenze Ijeneretha Eholayo
I-Plezi One isiza ukukhiqizwa kwabaholi abaqeqeshiwe ngokwengeza amafomu anemiyalezo ezenzakalelayo kumasayithi ezinkampani. Futhi ikuvumela ukuthi uqonde ukuthi umholi ngamunye wenzani kusayithi, nokuthi ushintsha kanjani isonto nesonto ngamadeshibhodi ahlanzekile.
Lokhu kuyinto okufanele icatshangelwe uma uqala uhambo lwakho lwedijithali futhi usabheka isixazululo esingcono kakhulu sokukhiqiza umthofu nokulandela umkhondo wewebhu kuhlangene. Inzuzo eyinhloko ye Plezi One ukuthi awudingi ukuba nolwazi lobuchwepheshe ukuze ulusebenzise noma uqale ukumaketha kwakho. Nansi indlela esebenza ngayo.
Qala isu lakho lokukhiqiza abaholayo
Amafomu ayindlela elula kakhulu neqondile yokuguqula isivakashi esingaziwa sibe umholi ofanelekayo kuwebhusayithi. Futhi kunamathuba amaningi okwenza isivakashi sigcwalise ifomu, kungakhathaliseki ukuthi ukuxhumana, ukucela ikhotheshini, noma ukufinyelela iphepha elimhlophe, incwadi yezindaba noma i-webinar.
On Plezi One, ukudalwa kwefomu kwenziwa ngokushesha nje lapho ungeza insiza entsha. I-Plezi inikeza izifanekiso ezahlukene, ezinemibuzo eguqulelwe ezinhlotsheni ezahlukene zamafomu ukuze ihambisane nezigaba zomjikelezo wokuthenga (futhi uqiniseke ukuthi awusihlukumezi isivakashi esifuna ukubhalisela iphephandaba lakho ngemibuzo).
Uma ufuna ukwakha isifanekiso sakho sefomu, ungakwenza lokho usebenzisa umhleli bese ukhetha izinkambu ofuna ukuzisebenzisa. Ungakwazi ukujwayela amafomu ukuze afane nokwakheka kwewebhusayithi yakho. Ungakwazi futhi ukwenza ngokwezifiso umlayezo wakho wemvume ku-GDPR. Uma usudale izifanekiso, ungangeza kusayithi lakho ngokuchofoza okukodwa!
Ungakwazi futhi ukudala ama-imeyili okulandelela athunyelwa ngokuzenzakalelayo kubantu abagcwalise ifomu, noma ngabe elokubathumela insiza abaceliwe noma ukubaqinisekisa ukuthi isicelo sabo sokuxhumana sinakekelwe. Ngokusebenzisa izinkambu ezihlakaniphile, ungakwazi ngisho nokwenza lawa ma-imeyili abe ngokwakho ngegama lokuqala lomuntu noma isisetshenziswa esilayishwe ngokuzenzakalelayo.
Qonda Ukuziphatha Kwezethameli Futhi Ufanele Ukuhola
Manje njengoba izivakashi zakho seziqala ukugcwalisa amafomu akho, ulusebenzisa kanjani ulwazi lwazo? Kulapho ithebhu ethi Contacts of Plezi One ingena khona, lapho uzothola khona bonke abantu abakunike imininingwane yabo yokuxhumana. Kulowo nalowo othintana naye, uzothola izinto ezimbalwa ezizokusiza wenze indlela yakho ibe ngeyakho.:
Umsebenzi wesivakashi nomlando ohlanganisa:
Amakhasi abukwe kusayithi lakho
Isiteshi esibalethe kusayithi lakho.
Imininingwane ye-prospect. ibuyekezwa ngokushesha lapho othintana naye enikeza ulwazi olusha ngokusebenzelana nokunye okuqukethwe:
Igama lokuqala nelokugcina
Le thebhu futhi ingasetshenziswa njengenkundla yokuphatha ubudlelwano bekhasimende elincane (CRM) uma ungakabi nayo. Ithimba lakho labadayisi lingakwazi ukwengeza amanothi kurekhodi ngalinye ukuze lilandelele ukuvela kobudlelwano nomuntu ongase abe khona.
Ungahlola konke ukusebenzelana kwezithameli zakho kuwebhusayithi yakho, njengoba lokhu kuhlanganyela kuyarekhodwa. Uzoba nombono ongcono wokuthi izethameli zakho zifunani nokuthi yikuphi okuqukethwe ezingaba nentshisekelo kukho.
Umbhalo wokulandela umkhondo uzokukhombisa ukuthi amathemba akho avelaphi, akwenzayo kuwebhusayithi yakho nokuthi abuya nini. Lesi isici esizuzisayo ngoba sikunikeza ukuqonda ngaphambi kokuba uqale ingxoxo nabo. Izibalo zingakusiza ukuthi ulandelele futhi uqonde amathuba akho.
Hlaziya Ukusebenza Kwesu Lakho
Isigaba sombiko sikuvumela ukuthi ubone izibalo zezenzo zakho zokumaketha shazi. U-Plezi ukhethe ukugxila kudatha ebalulekile ukuze uqonde ukusebenza kwesayithi lakho kanye namasu akho okumaketha, kunokugxila kumamethrikhi adidayo futhi asebenzisekayo. Kuyindlela enhle yomphathi noma umthengisi ukuthi aqonde ukumaketha kwedijithali!
Lapha ungabona yonke into eyenzekayo kusayithi lakho isikhathi esithile esinikeziwe, nenani labavakashi kanye nemikhondo yokumaketha, kanye negrafu yefaneli yakho yokuguqula ukuze ubone ukuthi mangaki amakhasimende akho okulethelwe wona. Ukulungiselelwa kwenjini yokusesha (SEO) isigaba sikuvumela ukuthi ubone ukuthi mangaki amagama angukhiye obekwe kuwo nokuthi ukala kuphi.
Njengoba ungabona, Plezi One iphikisana nezixazululo eziyinkimbinkimbi ngokweqile (futhi ngokuvamile ezingasetshenziswa kancane) ngokunikeza ulwazi oluwuketshezi lwethuluzi eliwumgogodla wesu lokumaketha lenkampani.
Inikeza ulwazi olunembile ukuvumela izinkampani ezingakabi nalo iqembu elizinikele ukuthi ziqale ukuqonda amantongomane namabhawodi wokumaketha kwedijithali futhi ziqale ukukhiqiza imikhondo ngewebhusayithi yazo. Kulula ukusetha, kulula ukuyisebenzisa futhi 100% mahhala! Unentshisekelo yokuthola ukufinyelela kwangaphambi kwesikhathi ku-Plezi One?
Bhalisela i-Plezi One MAHHALA lapha!
Tags: b2bisizukulwane esihola phambili se-b2bCRMukwakha ifomuifomu izifanekisoithuluzi lefomuukuhola phambiliukuhola genukuhola isizukulwaneiziqu zokuholapleziplezi onethola imikhondoumsebenzi wezivakashi